January 2015 ~ Myanmar Cute Gay Boy (MCGB)
On 1:50 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay love story7comments
ည​ကတိ​တ်​ဆိတ်ငြိမ်​သက်​လျှ​က်​ရှိ​သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်​တွင် မှောင်​မဲ​နေ​သော အရိပ်​အ​ယောင်​များ​မှ​လွဲ ၍​အခြား​သက်​ရှိ​ဟူ၍ ပျောက်​ခြင်း​မလှ​​ပျောက်​ဆုံး​နေ​ပါ​သည်။ သူ့​ရဲ့​အသက်ရှူ​သံတွေ​က ခပ်​ပြင်းပြ​င်း​လေး​ထွက်​ပေါ်​နေ​သည်။ ဝင်​လေထွက်​လေ ပင့်​သက်​ရှိုက်​လိုက်​တိုင်း သူ့​ရဲ့​ရင်​ထဲ​လှိုက်​က​နဲ လှိုက်​က​နဲ​ဖြစ်​သွား​သည်။ သူ့​မျက်နှာ​ပေါ်​ဝဲ​နေ​သည့် ဇာ​ခြင်ထောင်​စ​လေး​က သူ့​ရဲ့​အသက်ရှူ​လေကြော​င့် အနည်းငယ် လှုပ်​ခတ်​သွား​သည်။ သူ့​ခန္ဓာ​ပေါ်​တွင် အညာ​စောင်​အပါး​လေး​ကို​သာ​ခြုံ​ထား​ပါ​သည်။ သူ့​ခါး​က​ပုဆိုး​ကတော့ ကွင်း​လုံး​ပြေ​ပြီး သူ့​လည်ပင်း​သို့​ရောက်​နေ​ပါ​သည်။ သူ့​နှုတ်ခမ်း​သား​တွေ​ကို လျှာ​ဖြင့်​တစ်​ချက်​သပ်​လိုက်​ရင်း တိုးတိုး​လေး​ငြီး​ညူ​မိ​သည်။
စောင်​ထဲ​တွင်​လှုပ်ရှား​နေ​သော သူ့​ရဲ့​လက်​ကလေး သွက်​သ​ထက်​ပိုမို​သွက်​လာ​ပါ​သည်။ သူ့​အသက်ရှူ​သံတွေ မြန်​သ​ထက်​မြန်​လာ​ပြီး လောက​ကြီး​ကို​မေ့​ချင်​သ​လို လေ​ထဲ​သို့​လွင့်​မြောက်​သွား​သ​လို​ခံစား​နေ​ရသ​ည်။ ဆူ​ညံ​လှိုက်​ခုန်​နေ သော​သူ့​ရင်ခုန်​သံ အပိုင်း​အစ​တွေ​က ​ဟိုး​အဝေး​က​စကြဝဠာ​ထဲ​ကို လွှင့်​ပစ်​ခံ​လိုက်​ရသ​လို လွင့်​မြော​သွား​သည်။ သူ့​နှုတ်ခမ်း​လေး​ကို အသာ​ခပ်​ဖွ​ဖွ​လေး​ကိုက်​ထား​မိ​သည်။ သူ့​နားရွက်​လေး​တွေ​က​လဲ နီမြန်း​နေ​လောက်​ရော့​မည်။ သူ့​ဆံပင်​စ​တွေ​ကတော့ ရမ္မက်​ချွေး​တွေ​ဖြင့် စို​စ​ပြု​လာ​သည်။
သူ့​လက်​ရဲ့ လှုပ်ရှား​မှု​လေး​တွေ​င် မြန်​လာ​တာ​နဲ့​အမျှ တစ်​ချက်​တစ်​ချက်​တွင် အား​မ​လို​အား​မ​ရ​ဖြစ်​ပြီး ခါး​လေး​ကော့​ကော့​သွား​မိ​သည်။ ခံစား​မှု​အရသာ​တွေ အ​ထွတ်​ထိပ်​သို့​ရောက်​ရှိ​လာ​သော​အခါ ကောင်းကင်ဘုံ​က နတ်​စည်းစိမ်​တွေ သူ့​ပေါင်​ကြော​တစ်​လျှောက် စီး​ဝင်​လာ​ပါ​သည်။
သူ့​ရဲ့​ငြီး​သံလေး​က သဲ့သဲ့​လေး​ကို​ထိန်း​ချုပ် မှု​တွေ​ကြား​မှ ထွက်​မ​လာ​အောင် ထိန်း​မ​ထား​နိုင်​တော့​ပဲ ည​သန်းခေါင်​ရဲ့​တိတ်ဆိတ်​မှု​နဲ့​အတူ တိုး​လွင့်​စွာ​ထွက်​ပေါ်​နေ​သည်။ အိမ်​ထရံ​များ​အထက် ထုတ်​တန်း​ပေါ်​တွင် ပြေး​နေ​သော အိမ်မြှောင်​တစ်​ကောင်​က ရုတ်​တရက်​ရပ်တန့်​သွား​သည်။ သူ့​စိတ်​တွေ​မ​ခိုင်​တော့​ပါ။ သူ့​ရဲ့​ခံစား​မှု​တွေ အ​ထွတ်​အထိပ်​သို့​ရောက်​ရှိ​နေ​ပြီ​ဖြစ်​သည်။
စောင်​ထဲ​တွင်​လှုပ်ရှား​နေ​သော သူ့​လက်​တွေ​ကို ရုတ်​တရက်​ရပ်တန့်​လိုက်​သည်။ ထို့နောက် သူ​ခေါင်း​ထောင်​ကြည့်​လိုက်​သည်။ လ​ရောင်​အချို့​က​စေ့​ထား​သော အခန်း​ပြတင်းပေါက်​ဆီ​မှ ဖြာ​ကျနေ​သ​ဖြင့် သူ့​အမေ​၏ ကု​တင်​ကို​အတိုင်း​သား​မြင်​နေ​ရသ​ည်။ အမေ​တစ်​ယောက် နှစ်​နှစ်ခြိုက်​ခြိုက် အိပ်ပျော်​နေ​ဟန်​ရှိ​သည်။ ဟောက်​သံ​သဲ့သဲ့​လေး​ကို သူ​ကြားလိုက်​ရသ​ည်။ သူ​ဆုံးဖြတ်ချက်​တစ်​ခု ချ​လိုက်​သည်။ စောင်​ထဲ​တွင် သူ​ပြီး​သွား​လို့​မ​ဖြစ်​ပါ။ အရည်​တွေ​မန​ည်း​မနော​ထွက်​လာ​လျှင် သူ​သုတ်​နေ​ရ​မှာ​ပျင်း​သည်။ ပြီး​တော့ ချိုး​ချိုး​ချွတ်ချွတ်​အ​သံတွေ​ကြောင့် အမေ​နိုး​သွား​မှာ​လဲ​စိုး​သည်။
ထို့​ကြောင့် အိမ်သာ​ထဲ​သို့ ဆက်​ဝင်​ဖို့ သူ​ထ​လိုက်​သည်……..
တံခါး​ကို​အသာ​လေး​စေ့​ပြီး​သွား​ပြီ​ဆို​တာ​နှင့် သူ့​ခါး​မှ​ပုဆိုး​ကို​အ​လျင်​စ​လို​ပဲ စလွယ်​သိုင်း​လိုက်​ပါ​သည်။ ထို့နောက် ငိုက်​စ​ပြု​နေ​ပြီ​ဖြစ်​သော​သူ့​ပစ္စည်း​လေး​ကို ဖမ်း​ဆုတ်​လိုက်​ပြီး ပယ်​ပယ်​နှယ်​နှယ် မွှေ့​ရမ်း​လိုက်​၏။ ခဏ​တာ​အတွင်း​မှာ​ပဲ သူ့​ပစ္စည်း​လေး​က မတ်​လာ​ပါ​သည်။ သူ့​လက်​တွေ​ကို အလျှင်​စ​လို​ပဲ လှုပ်ရှား​လိုက်​သည်။ စောစော​က ပျောက်​သွား​တဲ့​သူ့​ရဲ့ Feel တွေ​အခု​အခါ ပြန်​ဝင်​ရောက်လာ​သည်။ သူ့​မျက်လုံး​တွေ​ကို အသာ​စင်း​ထား​လိုက်​ရင်း သူ့​ပန်းတိုင်​သို့​ရောက်​အောင် စွမ်း​ဆောင်​နေ​မိ​သည်။ သူ​တ​ဖြေး​ဖြေး​ကောင်းကင်​ပေါ်​သို့ တက်​သွား​ပါ​သည်။ လောက​မှာ​အ​ပျော်​ဆုံး​အချိန်​ကို ပြော​ပါ​ဆို​လျှင် တ​ကိုယ်​ရေ​အာသာ​ဖြေ​ရသ​ည့်​အချိန်​ပဲ​ဟု သူ​ဟစ်ကြွေး​လိုက်​ချင်​ပါ​သည်။ သူ့​ရဲ့​ဗိုက်​သား​ပြင်​တစ်​လျှောက်​ကို ပွတ်​သပ်​လိုက်​ရင်း ရိပ်​တက်​လာ​သော ရမ္မက်​ဖီ​လင်​တွေ​ကို အသာအယာ ခံယူ​နေ​မိ​သည်။ အပြင်​ဖက်​က အေးချမ်း​နေ​တဲ့​လမင်း​ကြီး​က​တော့ သူ့​ကို​သရော်​နေ​ရော့​မည်.........
သူ့​ခန္ဓာ​ကိုယ်​လေး​က တစ်​ချက်​တစ်​ချက်​တွင် ယိမ်းယိုင်​သွား​သည်။ သူ့​ခြေထောက်​တွေ ဒူး​တွေ​မ​ခိုင်​သ​လို​ဖြစ်လာ​သည်။သူ့​အသား​တွေ​က နွေး​သ​ထက်​ပို​ပြီး​နွေး​လာ​သည်။ သူ့​အသက်ရှူ​သံတွေ​က မြန်​သ​ထက်​ပို​မြန်​လာ​သည်။ သူ့​လက်​ရဲ့​လှုပ်ရှား​မှု​တွေ​က​လဲ သွက်​သ​ထက်​ပိုမို​သွက်​လာ​သည်။
သူ​သိ​နေ​သည်။ သူမ​ကြာ​ခင် ခရီး​ဆုံး​သို့​ရောက်​တော့​မည်။ မှောင်မိုက်​နေ​သော အိမ်သာ​ထဲ​တွင် မျက်လုံး​မှိတ်​ထား​ရင်း အ​မှောင်​ကမ္ဘာ​ထဲ​မှာ​သူ​ပျော်​နေ​မိ​သည်။ သူ့​ရင်ခုန်​သံတွေ​က စည်း​ချက်​ကျ​ကျ လှိုက်​ခုန်​နေ​သည်။ သူ့​ခန္ဓာ​ကိုယ်​ထဲ​က သွေးကြော​တွေ​ဟာ​လဲ ဆူပွက်​ကာ လည်ပတ်​စီး​ဆင်း​နေ​သည်။ သူ့​ငယ်​ပါ​က မာ​သ​ထက်​ပိုမို​မာ​တင်း​လာ​သည်။ သူ သူ့​ငယ်​ပါ​ကို​တင်း​ကြပ်​စွာ​ဆုပ်​ကိုင်​ထား​မိ​သည်။
တ​ဖြေးဖြေး ငယ်​ပါ​ကြော​တွေ​တင်း​လာ​သည်။ သူ​အသက်ရှူ​ရ​ခက်​လာ​သ​လိုလို…….. ရင်​ထဲ​မှာ မော​ဟိုက်​လာ​တာ​လိုလို……. သူ့​ခန္ဓာ​ကိုယ်​တစ်​ခု​လုံး ဓာတ်​လိုက်​သွား​သ​လိုလို…….
ကျင်​နေ​တဲ့​ခံစား​မှု​တစ်​ခု​က သူ့​ပေါင်​ကြော​တွေ​ဆီ​မှ တက်​လာ​သည်။ ထို့နောက် တ​ဖြေးဖြေး သူ့​ဆီး​ခုံ​သို့ ဖြတ်​လာ​ကာ ဆီး​ကြော​တွေ​မှ​တစ်​ဆင့် သူ့​ငယ်​ပါ​ထိပ်​သို့​ရောက်လာ​သည်။ သူမ​ထိန်း​နိုင်​တော့​ပဲ အားရ​ပါး​ရ ပန်းထု​တ်​လိုက်​ပါ​သည်။
သူ့​လက်​ခုံ​ပေါ်​သို့ ခပ်​နွေး​နွေး​အရည်​တွေ​စီး​ကျ​လာ​သည်။ ပြင်းပြ​စွာ​ထွက်​ပေါ်လာ​သော အသက်ရှူ​သံတွေ​နှင့်​အတူ သူ​မော​ဟိုက်​သွား​သည်…….။ အိမ်သာ​ထောင့်​ရှိ တိုင်​ကို ခေါင်း​ဖြင့်​လှမ်း​မှီ​ထား​လိုက်​သည်။ သူ့​အားအင်​တွေ​ဆုတ်ယုတ်​သွား​သ​လို​ခံစား​ရသ​ည်။ ထို့​အတူ သူ့​ဆန္ဒ​တွေ​လည်း ပြည့်​ဝ​သွား​ပါ​သည်။ သူ့​မျက်နှာ​တစ်​ဝိုက်​နွေး​တေး​တေး​လေး​ဖြစ်​နေ​ပြီး ရမ္မက်​မီး​ကြောင့် အနည်းငယ် မော​ဟိုက်​နေ​ပါ​သည်။ သူ့​ရဲ့ ငြီး​သံလေး​ကတော့ ခပ်​သဲ့သဲ့​လေး ထွက်​ပေါ်​နေ​တုန်း​ပါ။
ဒါ​ဟာ……. ဒီ​ည​အတွက် သူ့​ရဲ့​အိပ်​ဆေး​တစ်​ခွက်​ပဲ​ပေါ့……
သူ့​အမည်​က ကောင်း​သန့်။ အသက်​က ​၁​၆​နှစ်။ ဆယ်​တန်း​တက်​ရင်း အမေ​ဖြစ်​သူ​ကို အလုပ်​ကူ​လုပ်​ပေး​နေ​ရ​သူ​ဖြစ်​သည်။ သူ​တို့​မှာ အမေ​တစ်​ခု​သားတစ်​ခု​ဘဝ​ဖြစ်​သည်။ အဖေ​ဖြစ်​သူ​ကတော့ သူငယ်​စဉ်​ကတည်းက ဆုံးပါး​သွား​သည်​ဟု​ဆို​ကြ​သည်။ သူ့​အမေ​ဖြစ်​သူ​က စီးပွား​ရေး​ဟူ၍ ဘာ​မှ​မယ်​မယ်​ရ​ရ မ​လုပ်​တတ်။ ထို့​ကြောင့် သူ့​ကို​မုန့်ဟင်းခါး​ရောင်း​ပြီး ကျောင်း​ထား​ပေး​သည်။ သူ့​ရဲ့​အားလပ်​ချိန်​လေး​တွေ​ဟာ အမေ့​မုန့်​ဟင်း​ဆိုင်​လေး​ကို ကူညီ​ပေး​ဖို့ တစ်​စိတ်​တစ်​ဒေသ အထောက်​အ​ကူ​ပြု​ပါ​သည်။ သူ့​ဘဝ​ကြီး​ဟာ သင်​ရိုး​ကြေ​နေ​ပြီး​တဲ့ ကျောင်းသား​တစ်​ယောက်​လို အရာ​ရာ​ကို မိမိ​အသိ​စိတ်​ဓာတ်​ဖြင့် အလိုက်သိ​ခဲ့​ရ​ပါ​သည်။
မ​ပြည့်စုံ​တဲ့​ဘဝ​တစ်​ခု​မှာ ကြီး​ပျင်း​လာ​ရ​သူ​မို့ အရာ​ရာ​ကို​ရောင့်ရဲ​တင်းတိမ်​ခဲ့​ရ​ပြီး ဘဝ​ကို​ဖာထေး​ခဲ့​ရသ​ည်။ တစ်​ကယ်​တော့ သူ့​ဘဝ​က စုတ်ပြတ်​သတ်​နေ​သည့် တောင်း​စုတ်​တစ်​လုံး​နှင့်​တူ​သည်။ အ​ဆိုး​ထဲ​က အကောင်း​လို့​ပဲ​ပြော​ရ​မ​လား လောက​ကြီး​က သူ့​ကို​ငွေ​ကြေး​ပြည့်စုံ​အောင် ဖန်တီး​မ​ပေး​ပေ​မယ့် ရုပ်​ရည်​လေး​ကတော့ သူ့​ကို​အများ​အလည်​မှာ မျက်နှာ​မ​ငယ်​စေ​ခဲ့​ရ​ပါ။ သူ့​တွင် ညီညာ​ဖြောင့်တန်း​နေ​သည့် မျက်ခုံးမွှေး​နက်​နက်​လေး​ရှိ​သည်။ မ​ဖြူ​လွန်း​ပေ​မယ့် ကြည့်​ပျော်​ရှု​ပျော်​ရှိ​သည့်​အသား​အရည်​ကို ပိုင်ဆိုင်​ထား​သည်။ အရပ်အမောင်း​မှာ​လဲ ပြော​စရာ​မ​ရှိ။ Orthodontics လုပ်​စရာ​မ​လို​ပဲ သ​ဘာ​ဝ​အတိုင်း ညီညာ​နေ​သော သွား​ဖွေး​ဖွေး​လေး​များ​က​လည်း လူ​တကာ​အလည်​မှာ အ​ပြုံး​လှ​လှ​လေး​တွေ​ကို ဖန်ဆင်း​နိုင်​ဖို့ အား​သာ​ချက်​တစ်​ခု​ဖြစ်​ခဲ့​သည်။
သူ့​ကို​ကျောင်း​သွား​ကျောင်း​ပြန်​လုပ်​ဖို့ စက်ဘီး​ပြင်​ဆိုင်​မှ စက်ဘီး​အဟောင်း​တစ်​စီး​အမေ​က ဝယ်​ပေး​ထား​သည်။ ဆယ်​တန်း​ကျောင်းသား​ဆို​ပေ​မယ့် သူ​ကျူ​ရှင်မ​တက်​နိုင်​သေး​ပါ။ ကျူ​ရှင်​ခ​က ဈေး​ကြီး​တယ် မဟုတ်​ပေ​မယ့် အမေ့​ကို​ကူညီ​ရ​မယ့်​အချိန်​တွေ လျော့​သွား​မှာ​စိုး​၍ သူမ​တက်​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ သို့​ပေ​မယ့် ဉာဏ်ကောင်း​သည့်​သူ့​အတွက် ကျောင်း​စာ​များ​ကို သူ​များ​တွေ​ထက် မ​ညံ့​အောင်​တော့ သင်​ယူ​နိုင်​ခဲ့​ပါ​သည်။ နေ့​တိုင်း​ညနေ​ကျောင်း​ဆင်း​ပြီ​ဆို​ရင် အမေ​မုန့်ဟင်းခါး​ဟင်းရည်​ချက်​ဖို့ ကုလားပဲ​တွေ လို​အပ်​တဲ့ အဆာ​ပ​လာ တွေ​ဈေး​သို့​သွား​ပြီး သူ​ဝယ်​ပေး​ရသ​ည်။ ထို့နောက် အိမ်​သို့​ပြန်​ရောက်​ပြီ​ဆို​လျင် ငရုတ်​သီး​ထောင်း​တာ​တို့ ကြက်သွန်​ခွာ​တာ​တို့​က သူ​တာဝန်​ယူ​ရသ​ည့်​အလုပ်​တွေ​ပါ။
ဒီ​မနက်​က ရာသီ​ဥတု​က​သာသာ​ယာ​ယာ​လေး​ပါ။ အမေ​ဆိုင်​သိမ်း​ပြီး​ပြီ​မို့ သူ​အပြင်​သို့​တစ်​ယောက်​ထဲ ထွက်​လာ​ပါ​သည်။ ကျောင်း​အားလပ်​ရက်​ကလေး​တွေ​မှာ ဟို​ဟို​သည်​သည် သူ​လျှောက်​သွား​ဖြစ်​သည်။ လယ်​က​သင်း​ရိုး​တွေ​ကြား​ထဲ စက်ဘီး​ကို​နင်း​လာ​ရင်း လွတ်လပ်​တဲ့ အရသာ​ကို သူ​ခံစား​နေ​မိ​သည်။ အဝေး​မှ တိုက်​ခတ်​လာ​သော လေ​အေး​တွေ​က သူ့​ဆံပင်​တွေ​ကို တ​ဖြတ်​ဖြတ်​ခါ​ရမ်း​နေ​စေ​သည်။ သူ့​ရဲ့ T-shirt ကလေး​က​လဲ လေ​၏​တိုက်​ခတ်​မှု​ကြောင့် လှုပ်​ခတ်​နေ​သည်။ ညစ်နွမ်း​နေ​ပြီ​ဖြစ်​သော သူ့​ဂျ​င်း​ဘောင်းဘီ​ကတော့ အပေါက်​တွေ​ဗ​ရ​ဘွ​နှင့်​ပါ။ ပေါင်လယ်​ခန့်​တွင်​ပေါက်​နေ​သော အပေါက်​ကြီး​က အ​ထဲ​မှ သူ့​ပေါင်း​သား​တွေ​ကို​မြင်​နေ​ရ​ပြီး ထို​ပေါင်​သား​ပေါ်​မှ မွှေး​ညှင်း​နု​ကလေး​တွေ​ကို​ပါ ရှင်းလင်း​စွာ တွေ့​မြင်​နေ​ရသ​ည်။
ဒီ​လို​ရာသီ​ဥတု​လေး​နှင့်​ဆို​ရင် Smart phone လေး​တစ်​လုံး​ကို နား​ကြပ်​လေး​တပ်​ပြီး နားထောင်​လိုက်​ရင် ဘယ်လောက်​ကောင်း​လိုက်​မ​လဲ​ဟု သူ​တွေး​နေ​မိ​သည်။ အတန်း​ထဲ​က Smart phone တွေ​ကိုင်​နေ​ကြ​သည့် သူ့​အတန်း​ဖော်​တွေ​ကို အားကျ​မိ​သည်။ သို့​ပေ​မယ့် အရာ​ရာ​ကို ရောင့်ရဲ​တင်းတိမ်​နေ​ရသ​ည့်​သူ့​အတွက် မုန့်ဟင်းခါး​ရောင်း​နေ​သည့် မိ​ခင်​ကို Smart phone ဝယ်​ပေး​ဖို့​တော့ မ​ပူဆာ​ရက်​ပါ။ ထား​ပါ​တော့​လေ….. ဒါ​က​သူ့​ဘဝ​ရဲ့ မ​ပြည့်စုံ​မှု​တွေ​ပါ။ ပြန်​တွေး​ကြည့်​ရင် နည်း​နည်း​တော့​ရင်နာ​မိ​သည်။ ဘာ​ကြောင့်​များ လူ​သားချင်း​အတူတူ သူ့​ဘဝ​က မ​ပြည့်စုံ​နေ​ရသ​လဲ​ပေါ့။ တစ်​ခါ​တစ်​လေ​မှာ အရည်အချင်း​ရှိ​ရက်​နှင့် ရသ​င့်​ရ​ထိုက်​သည့်​အခွင့်အရေး​တွေ​ကို ငွေ​ကြေး​ချွတ်ယွင်း​မှု​ကြောင့် မ​ရ​ယူ​နိုင်​သည့်​အခါ​မျိုး​တွေ​တွင် သူ့​ဘဝ​ကို​သူ အား​မ​လို​အား​မ​ရ​ဖြစ်​မိ​တာ​တော့​အမှန်​ပါ။
လယ်​ကွင်း​တွေ​ကြား စက်ဘီး​ကို​ခဲ​ရာ​ခဲ​ဆစ်​မောင်း​လာ​ရင်း မော​ဟိုက်​လာ​မိ​သည်။ ထို့​ကြောင့် စက်ဘီး​ကို သူ့​ဘေး​မှာ​လှဲချ​လိုက်​ပြီး လယ်​က​သင်း​ဘောင်​ပေါ် တက်​ထိုင်​နေ​လိုက်​သည်။ သူ့​အနီး​တွင် စာ​ခြောက်​ရုပ်​ကြီး​က တ​ထီး​မား​မား​ကြီး ရပ်တန့်​နေ​သည်။ ကောင်းကင်​ယံ​တွင်​တော့ ငှက်​အချို့​ပျံ​သန်း​လျှ​က်​ရှိ​သည်။ ထို​ငှက်​တွေ​က ဘာ​ငှက်​တွေ​လဲဆို​တာ​တော့ သူမ​သိ​ပါ။ သူ့​စက်ဘီး ကယ်​ရီ​ယာ​ခုံ​ကြား​ထဲ​တွင် ညှပ်​ထား​သော စာအုပ်​တစ်​အုပ်​ကို သူ​ဆွဲထုတ်​လိုက်​သည်။ သူ​သိပ်​ကြိုက်​သည့် စာအုပ်​လေး​ပါ။
အပျိုကြီး​တစ်​ယောက်​နှင့်​ကောင်​လေး​ငယ်​ငယ်​တစ်​ယောက်​တို့​ရဲ့ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​တွေ​ကို ဖွဲ့​ညွှန်း​ထား​သည့် စာအုပ်​လေး​ပါ။ အရပ်​အခေါ်​အရ​တော့ “အပြာ​စာအုပ်” ဟု​ခေါ်​သည်။ သူ​ကတော့​ထိုသို့​မ​ထင်​ပါ။ လိင်​ဆို​တာ​က​လဲ အချစ်​က​ဆင်းသက်​လာ​တာ​ပဲ​လေ။ အချစ်​ရှိ​လို့ လိင်​ဆို​တာ​ဖြစ်လာ​တာ။ အချစ်​မ​ရှိ​ပဲ လိင်​ဆို​တာ ဘယ်​က​ရောက်လာ​ပါ့​မ​လဲ။ တကယ်​တော့ လိင်​ဆက်ဆံ​တယ်​ဆို​တာ လူ​တစ်​ယောက်​နဲ့​တစ်​ယောက် အချစ်​လွန်သွား​ကြ​ခြင်း​ပါ။ သူ​ကတော့ ဒီ​လို​ပဲ​မြင်​သည်။ သူ​တို့​လို လူပျိုပေါက်​စ ကောင်​လေး​တွေ လိင်​ဆို​တာ​နဲ့ အထိ​အ​တွေ့​မ​ရှိ​သေး​သည့် ကလေး​တွေ အတွက်​ဒီ​လို​စာအုပ်​လေး​တွေ​က အာသာ​ဖြေ​စရာ​လေး​တွေ​ပါ။
အရာ​ရာ​ကို​စူးစမ်း​လို​သည့် စိတ်​ဆန္ဒ​တွေ​ပြင်းထန်​နေ​သည့် ဒီ​အရွယ်​မှာ လိင်​ဆို​တာ​က​လည်း သူ​တို့​အတွက် အ​ထူး​အရေး​ပါ​သည့်​အရာ​တစ်​ခု​ပါ။ သူ​ဒီ​စာအုပ်​လေး​ကို တစ်​ခါ​ဖတ်​မိ​တိုင်း တစ်​ခါ​အာသာ​ဖြေ​မိ​သည်။ သူ​ဒီ​စာအုပ်​ကို ဖတ်​တာ အကြိမ်​တစ်​ရာ​မက​တော့​ပဲ။ စာအုပ်​ထဲ​မှ​စာသား​တွေ​ကို​ပင်​အလွတ်​ရ​နေ​ပါ​ပြီ။
သူ​စာအုပ်​လေး​ရဲ့ စာ​မျက်နှာ​တစ်​ချို့​ကို​လှန်​လိုက်​သည်။ ထို့နောက် စာ​ပိုဒ်​အချို့​ကို ဖတ်​ရှု​နေ​မိ​သည်။ မနေ့​ည​က​လဲ ဒီ​စာအုပ်​ဖတ်​လို့​အပြီး​မှာ သူ့​စိတ်​တွေ​ထကြွ​သောင်းကျန်း​လာ​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ သူ​တို့​လို လူပျိုပေါက်​စ​လေး​တွေ အခု​လို ရမ္မက်​စိတ်​ကလေး​တွေ ထကြွ​လာ​တဲ့​အခါ တစ်​ခု​တည်း​သော ဖြေ​ရှင်း​သည့် နည်း​လမ်း​ကတော့ ရှင်း​ပါ​သည်။ တ​ကိုယ်​ရေ​အာသာ​ဖြေ​ခြင်း​ပါ။ ဒီ​နည်း​လမ်း​ကို သူ​ရှစ်​တန်း​တက်​စဉ်​က အတန်း​ဖော်​တစ်​ယောက်​က သင်ပေး​ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ သူ​ရဲ့​အရသာ​က ဘယ်​လို​ပြော​ရ​မ​လဲ……..
ရုတ်​တရက်​ခေါ်​သံ​ကြောင့် သူ​လှည့်​ကြည့်​မိ​တော့ ကား​လမ်း​ပေါ်​တွင် ရပ်​နေ​သော​ကောင်​လေး​တစ်​ယောက်။
သူ​လက်ရမ်း​ပြီး​နှုတ်ဆက်​လိုက်​ပါ​သည်။ ကား​လမ်းမ​ပေါ်​တွင်​ရပ်​ပြီး သူ့​ကို​ခေါ်​လိုက်သူ​မှာ သူ​တို့​အခန်း​က သူ​နှင့်​ခုံ​ခြင်း​ကပ်​လျက်​ကျောင်းသား​ဖြစ်​သည်။ ထို​ကျောင်းသား​နာမည်​က လမင်း​ဖြစ်​သည်။ လမင်း​က​လည်း သူ့​လို​ပဲ ရုပ်​ရည်​မ​ဆိုး​လှ​သည့် ကောင်​လေး​တစ်​ယောက်​ပါ။ လမင်း​က သူ​ရှိ​ရာ​သို့ လျှောက်​လာ​ပါ​သည်။ သူ​လမင်း​လာ​နေ​သည်​ကို မြင်​သော​အခါ လက်​ထဲ​ရှိ​စာအုပ်​ကို စက်ဘီး​ကယ်​ရီ​ယာ​ခုံ​ကြား​ထဲ​သို့ အသာ​ထိုး​ထဲ့ ထား​လိုက်​သည်။
“အေး​လေ ပျင်း​တာ​နဲ့ အိမ်​က​ထွက်​လာ​တ။ ဒါ​နဲ့​မင်း​ဒီ​နေ့​ကျူ​ရှင်မ​သွား​ဘူး​လား”
“ကျူ​ရှင်​က ညနေ​မှ​လေ။ မနက်​ဖြန် ကျ​ရင် Physic ဖြေ​မယ်​တဲ့။ မင်း​ရ​ပြီ​လား”
သူ​အသာ​ခေါင်း​ညိတ်​ပြ​လိုက်​သည်။ တကယ်​တော့ ပိုင်​ပိုင်နိုင်​နိုင်​ကြီး မဟုတ်​သေး​ပါ။ သို့​ပေ​မယ့် လ​ပတ်စာ​မေး​ပွဲ​လောက်​က သူ့​အတွက်​တော့ ဘာ​မှ​ခက်​ခက်ခဲ​ခဲ​ကြီး​မဟုတ်​ပါ။ လမင်း​က​သူ့​စက်ဘီး ကြား​တွင်​ညှပ်​ထား​သော စာအုပ်​ကလေး​ကို​တွေ့​သွား​ဟန်​ရှိ​သည်။
သူ​ပြာ​ပြာ​သလဲ​ဖြစ်​သွား​မိ​သည်။ မ​တော်​လို့ လမင်း​က သူ့​ဆီ​မှာ​အပြာ​စာအုပ်​ရှိ​တဲ့​အကြောင်း​ကို ကျန်​တဲ့​ကျောင်းသား​တွေ​ကို လျှောက်​ပြော​ပါ​က ကျောင်းသား​တွေ သူ့​ဆီ​က စာအုပ်​ကို လာ​ငှား​ဖတ် ကြ​တော့​မည်။
“အဲ့​ဒါ……ဟို……. ဘာ​မှ​မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ”
လမင်း​က သူ့​ကို​မ​သ​င်္က​࿿ာ​သ​လို​ကြည့်​သည်။ လမင်း​ရဲ့​မျက်လုံး​တွေ​က စက်ဘီး​ကြား​ထဲ​တွင် ညှပ်​ထား​သော စာအုပ်​လေး​ကို စိတ်ဝင်စား​နေ​ကြော​င်း သက်သေပြ​နေ​သည်။ သူ​လမင်း​ကို​ဘယ်​လို ညာ​ပြော​ရ​ပါ​မ​လဲ။ အရေး​နဲ့​အကြောင်း​ဆို ခေါင်း​ထဲ​မှာ သူ​များ​ယုံ​လောက်​အောင် လိမ်​နိုင်​သည့် ဉာဏ်​နီ​ဉာဏ်နက်​တွေ​က ဖျစ်​ညှစ်​၍​မ​ထွက်​နိုင်။
မ​ထူး​တော့​ပါ​ဘူး​ဟု စိတ်​ထဲ​က ဆုံးဖြတ်​လိုက်​ပြီး လမင်း​ကို​ကြည့်​တော့ ဟု​ပြော​လိုက်​မိ​သည်။
“ဝိုး………ဟေ့​ကောင် မင်း​ဟာ​က​အမိုက်​စား​ပဲ​ကွ။ ငါ့ကို​တစ်​ရက်​လောက်​ငှါး​ပါ​လား”
“မင်း​ဘယ်​သူ့​ကို​မှ လက်ဆ​င့်​မက​မ်း​ပါ​ဘူး​လို့ ကတိ​ပေး​ရဲ​လား”
“အာ….. ရ​တယ် ငါ​အာမခံ​တယ်။ ငါ​ဖတ်​ပြီး​ရင် မင်းကို​ပြန်​ပေး​မယ်”
လမင်း​က သူ့​ကို​ကျေးဇူးတင်​သွား​ဟန်​ရှိ​သည်။ သူ့​ပု​ခုံး​ကို လာ​ကိုင်​သည်။ သူ​လမင်း​လက်​တွေ​ကို အသာ​ပြန်​ပုတ်​ချ​လိုက်​သည်။ လမင်း​က​သူ့​ကို​ကြည်​ပြီး ခပ်​ရဲ့​ရဲ့​ရယ်​သည်။ ဒီ​ကောင်​ဘာ​ရယ်​တာ​လဲ​တော့ သူမသိပါ။ လမင်း​က​နည်း​နည်း​နှာဘူး​တယ်​ဆို​တာ​တော့ သူ​သိ​ထား​သည်။ လမင်း​ရဲ့​ဖုန်း​ထဲ​မှာ လိင်​ရုပ်​ရှင်​တွေ ရှိ​ကြော​င်း​လဲ သူ​သိ​သည်။ သူ​လမင်း​နှင့်​ရင်း​နီး​ကာ​စ​က သူ့​ကို​တစ်​ခါပြ​ဖူး​သည်။ ဒါ​ပေ​မယ့် ယောက်ျား​ပျို​တစ်​ယောက်​ရဲ့ ဖုန်း​ထဲ​မှာ ဒါ​လေး​တွေ​ရှိ​နေ​တတ်​တာ​တော့ သဘာဝပါ။ ခဏ​နေ​တော့ လမင်း​က​သူ့​ကို​နှုတ်ဆက်​ပြီး​ပြန်သွား​သည်။ မနက်​ဖြန်​အတန်း​ထဲ​ရောက်​မှ​တွေ့​မည်​ဟု ဆို​သည်။
အတန်း​ထဲ​တွင်​ကျောင်းသား​များ ဆူ​ညံ​ပွက်​ကလော​ရိုက်​နေ​သည်။ လ​ပတ်စာ​မေး​ပွဲ​ဖြေ​ပြီး​သွား​ပြီ ဖြစ်​သော​ကြောင့် စာ​မေး​ပွဲ​အကြောင်း စားမြုံ့ပြန်​နေ​ကြ​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ ကောင်း​သန့်​က သူ့​လွယ်အိတ်​ထဲ​တွင် ရှိ​သော Chemistry စာအုပ်​လေး​ကို​ထုတ်​ကား စာရေးခုံ​ပေါ်​သို့​တင်​လိုက်​သည်။ မနက်​ဖြန်​ဆို​လျှင် ဖြေ​ရ​တော့​မည်​မဟုတ်​ပါ​လား။ စာအုပ်​ကလေး​ကို​လှန်​လော နေ​စဉ်​တစ်​စုံ​တစ်​ယောက်​က သူ့​အနား​သို့​ရောက်လာ​သည်။ သို့​သော် သူ​လှည့်​မ​ကြည့်​မိ​ပါ။ ထိုသူက သူ့​န​ဘေး​တွင်​ဝင်​ထိုင်​လိုက်​သည်။ သူ့​နှာခေါင်း​ထဲ​တွင် ကိုယ်​သင်း​နံ့​တစ်​ခု​ကို​ရ​လိုက်​သည်။ ထို​ကိုယ်​သင်း​နံ့​ကို​သူ​သိ​ပါ​သည်။
သူ​ထင်​သည့်​အတိုင်း လမင်း​ပါ။ သူ​ခေါင်း​ညိတ်​ပြ​လိုက်​သည်။
လမင်း​ကို​မြင်​မှ သူ​တစ်​ခု​ခု​ကို​သတိရ​သွား​ဟန်​ဖြင့်……. တစ်​ခု​ခု​ပြော​မည်​ပြု​စဉ် လမင်း​က…
“နေ​ဦး နောက်​မှာ​နည်း​နည်းကျ​န်​သေး​တယ်။ ဖတ်​လို့​မ​ပြီး​သေး​ဘူး”
သူ​တို့​နှစ်​ဦး​တစ်​ယောက်​နဲ့​တစ်​ယောက် စကားပြော​နေ​စဉ် အတန်း​ထဲ​သို့ ဘာသာ​ပြ​ဆရာ​မ​တစ်​ဦး​ဝင်​လာ သ​ဖြင့် စကား​တွေ​ပြတ်​သွား​သည်။ ဆရာမကို နှုတ်ဆက်​ပြီး​နောက် ဆရာမက နောက်​နေ့​ဖြေ​မည့် စာ​တွေ​ကို ကျောင်း​သင်ပုန်း​ပေါ်​တွင်​ရေး​နေ​သည်။ လမင်း​က သူ့​အနား​မှာ​ပဲ​ထိုင်​ဖြစ်​သွား​သော​ကြောင့် သူ့​နေရာ​သို့​သူမ​ပြန်​တော့​ပဲ သူ့​အနား​မှာ​ပဲ​ဆက်​ထိုင်​နေ​သည်။ လမင်း​နေရာ​တွင် သူ့​န​ဘေး​မှ​ကျောင်းသား​က အလိုက်သင့်​ထိုင်​လိုက်​ပြီ​ဖြစ်​သည်။
စာ​သင်​တော့​မည်​မို့ ကောင်း​သန့်​စိတ်​တွေ​ကို​ပြန်လည်​စုစည်း​လိုက်​ပြီး ကျောက်သင်ပုန်း​ရှိ​ရာ​သို့ အာရုံ​စိုက် လိုက်​ပါ​သည်။ သူ့​န​ဘေး​က​လမင်း​က​လည်း စာအုပ်​တွေ​ကို​စားပွဲ​ပေါ်​သို့​ထုတ်​ကာ လှန်​လော​နေ​ပါ​သည်။ အရှေ့​မှ​ဆရာ​မက စာ​အကြောင်း​စတင်​ရှင်း​ပြ​နေ​သည်။
ဘာ​ကြောင့်​မှန်း​မ​သိ ကောင်း​သန့်​၏​စိတ်​တွေ ကျောက်သင်ပုန်း​ဆီ​သို့ မ​ရောက်​နိုင်​ပဲ လမင်း​ရှိ​ရာ​သို့​သာ ရောက်​နေ​ပါ​သည်။ မိမိ​ကိုယ်​ကို​ဘာ​ဖြစ်​မှန်း​လဲ​မ​သိ​ပါ။ သူ့​န​ဘေး​မှာ​ထိုင်​နေ​သည့် လမင်း​၏​လှုပ်ရှား​မှု​တွေ​ကို မျက်စိ​တစ်​ဆုံး​လိုက်​ကြည့်​နေ​မိ​သည်။
လမင်း​က စာအုပ်​ကို​စားပွဲ​ပေါ်​သို့ ဒေါင်​လိုက်​ထောင်ထား​လိုက်​သည်။ ထို့နောက်​လွယ်အိတ်​ထဲ​မှ သူ့​ဆီ​က​ယူထား​သည့်​အပြာ​စာအုပ်​လေး​ကို ကြား​ထဲ​ကညှပ်​ပြီး​လှန်​နေ​သည်​ကို​တွေ့​လိုက်​ရသ​ည်။ သူ့​အံ​ဩ​သွား​မိ​သည်။ ဒီ​ကောင်​စာ​သင်​ချိန်​ကြီး​ကို ဒါ​တွေ​ဖတ်​နေ​တယ် သေ​တော့​မှာ​ပဲ……..
လမင်း​က​စာ​တော်​မှန်း​တော့​သူ​သိ​သည်။ လ​ပတ်စာ​မေး​ပွဲ​တွေ​လောက်​ကို သိပ်​ပြီး​ဂရု​တ​စိုက်​ကျက်​လေ့​ရှိ​သူ မဟုတ်​ပါ။ စာ​တော်​ကြည့်​ကျောင်းသား​ဆို​တော့​လဲ ပေါ့​ပျက်​ပျက်​နိုင်​တာ​လည်း​ပါ​မည်​ထင်​သည်။ သို့​သော် အတန်း​ချိန်​ကြီး​မှာ အပြာ​စာအုပ်​ဖတ်​ဖို့​ကြိုးစား​တာ​ကတော့ စည်း​လွန်​ဘောင်​လွန်​ဖြစ်​လွန်း​သည်​ဟု သူ​ခံယူ​မိ​သည်။ သူ​လမင်း​ကို​တားမြစ်​ဖို့​ကြိုးစား​သည်။ သို့​သော် အခန်း​ထဲ​တွင်​ဆရာ​မ​အ​သံ​မှ​လွဲ​၍ ကျန်​သည့် အ​သံ​များ​တိတ်ဆိတ်​နေ​သ​ဖြင့် သူ​အသံကျယ်​ကျယ်​မ​ဟ​ရဲ​ပါ။
လမင်း​လှန်​နေ​သော အပြာ​စာအုပ်​ထဲ​မှ စာသား​တစ်​ချို့​ကို​သူ​အတိုင်း​သား​မြင်​နေ​ရသ​ည်။ သူ့​စိတ်​တွေ ပူ​ထူ​ထ​ကြွာ​လာ​သ​လို​ခံစား​ရသ​ည်။ ဒီ​စာအုပ်​ထဲ​တွင် ရမ္မက်​သွေး​တွေ​ရှိ​နေ​သည်မ​ဟုတ်​ပါ​လား။ သူ​ထို​စာအုပ်​ကို ကြည့်​မိ​ပြီ​ဆို​လျှင် သူ့​ဆီ​ကို​အဲ့​ဒီ​ရမ္မက်​သွေး​တွေ​ဟာ ပျံ့လွင့်​လာ​မှာ​သေချာ​ပါ​သည်။ သူ​စိတ်​ကို​အတတ်​နိုင်​ဆုံး​တည်​ငြိမ်​အောင်​ထိန်း​ချုပ်​လိုက်​သည်။
လမင်း​က​စာ​မျက်နှာ​တစ်​ခု​ကို​လှန်​လိုက်​သည်။ ထို​စာ​မျက်နှာ​မှ​စာသား​တွေ​ကို သူ့​စိုက်​ကြည့်​လိုက်​မိ​သည်။ သူ့​မျက်လုံး​တွေ​ဟာ​လဲ လမင်း​နဲ့​အတူတူ အပြာ​စာအုပ်​ပေါ်​သို့​ရောက်​ရှိ​နေ​ပါ​သည်။ စိတ်​ထဲ​မှာ​တော့ စိုးရိမ်​စိတ်​တွေ​နဲ့​အတူ လှိုင်း​လုံး​ကြီး​တွေ​စီး​နေ​ရသ​လို ရင်ခုန်​လှိုက်​မော​နေ​ရသ​ည်။ တစ်​ချက်​တစ်​ချက်​တွင် ဆရာမက အသံကျယ်​ကျယ်​ဖြင့်​ပြော​လိုက်​သော​အခါ သူ့​လက်​ကလေး​တွေ ဂဏာ​မ​ငြိမ်​တော့​ပဲ လှုပ်ရှား​သွား​မိ​သည်​အထိ စိတ်​လှုပ်ရှား​နေ​မိ​သည်။ လမင်း​ကတော့ ကျောက်​စစ်​ရုပ်​တစ်​ရုပ်​လို ငြိမ်​သက်​စွာ​ဖြင့် စာအုပ်​ကို အာရုံ​စိုက်​နေ​ပါ​သည်။
သူ့​ဆံ​စ​တွေ​ထဲ​ချွေး​တွေ​ပြန်လာ​သည်။ ချွေး​စက်​အချို့​က သူ့​နားထင်​မှ​စီး​ကျ​လာ​၏။ ပြတင်းပေါက်​မှ တစ်​ဖြတ်​ဖြတ် တိုက်​ခတ်​လာ​သော လေ​အေး​တွေ​က တစ်​ချက်​တစ်​ချက် သူတို့ဆီကို ဝင်​မွှေ့​သွား​သည်။ လမင်း​ရဲ့​မျက်နှာ​ကို​စိုက်​ကြည့်​မိ​တော့ လောက​ကြီး​ကို​မေ့​နေ​ဟန်​ရှိ​ပြီး အပြာ​စာအုပ်​ထဲ​သို့ အာရုံ​တွေ​နစ်​မြော နေ​ကြော​င်း​တွေ့​ရသ​ည်။ လမင်း​က​ကျောင်း​ယူ​နီ​ဖောင်း​ကို ကျယ်​သီး​နှစ်​လုံး​လောက်​ဟ​ပြီး ဝတ်​ထား​သ​ဖြင့် လမင်း​ရင်ဘတ်​တစ်​လျှောက်​ရှိ လူပျိုပေါက်​စ​လေး​၏ မွှေး​ညှင်း​နု​လေး​တွေ​ကို မြင်​တွေ့​နေ​ရသ​ည်။ လမင်း​အသက်ရှူ​လိုက်​တိုက် ထို​မွှေး​ညှ​င်​နု​လေး​တွေ​ပေါ်​တွင် ဖြတ်​သန်း​သွား​ပြီး လမင်း​အ​င်္က࿿်ီ​စ​လေး​က ပိန်​လိုက်​ဖောင်း​လိုက်​ဖြစ်​ဖြစ်​သွား​သည်။
စာအုပ်​ကို​ကိုင်​ထား​သော လမင်း​၏​လက်မောင်း​နှင့်​သူ​၏​လက်မောင်း​တို့​က ထိ​စပ်​နေ​သည်။ လမင်း​၏​အသား​တွေ​က နွေး​နေ​သည်။ သူ​လမင်း​န​ဘေး​မှ ခပ်​ခွာ​ခွာ​မ​နေ​မိ​ပဲ​ဘာ​ကြောင့်​များ အသား​ချင်း​ထိ​နေ​ရ သည်​ကို​မက်မော​နေ​မိ​သ​လို​ဖြစ်​နေ​တာ​ပါ​လိမ့်။ တဒင်္ဂ࿿အတွင်း​ဖြစ်​ပေါ်​နေ​သည့် ဒွိဟ​စိတ်​တွေ​ဟာ ထူးခြား​ဆန်း​ကျယ်​နေ​ပြီး အရောင်​တွေ​အမျိုး​မျိုး​ပြောင်း​နေ​ပါ​သည်။ သူ​ကိုယ်တိုင်​ပဲ ထို​အရောင်​တွေ​ကို ဝေဖန်​ပိုင်းခြား​နိုင်​စွမ်း​မ​ရှိ​တော့​လောက်​အောင် ယစ်မူး​မိန်းမော​နေ​မိ​သည်။ တ​ဖြေးဖြေး​ဖြင့် သူ့​အ​ကြည့်​တွေ​က လမင်း​၏​ပုဆိုး က​ပုံ​စ (စား​လုံး​ပေါင်း​သည်းခံ​ပါ) ဆီ​သို့​ရောက်​ရှိ​သွား​ပါ​သည်။ ပုဆိုး​ကြား​ထဲ​တွင် ထင်း​နေ​သော လမင်း​ပစ္စည်း​လေး​ကို တွေ့​လိုက်​ရ​သော​အခါ သူ့​ရင်​ထဲ​လှိုက်​က​နဲ​ဖြစ်​သွား​မိ​၏။ ဘုရား…….ဘုရား…….. သူ့​စိတ်​တွေ​မူ​မ​မှန်​တော့​ပါ​လား။ ဘာ​ကြောင့်​များ စိတ်​တွေ​ထိန်းသိမ်း​ရ​ခက်​ပြီး ထိန်း​ချုပ်​မှု​အောက်​က လွတ်မြောက်​နေ​ရ​တာ​လဲ။ သူ့​စိတ်​တွေ​က လေ​ထဲ​မှာ​ပျံ​ဝဲ​နေ​သ​လို​ပဲ သူ​ဘယ်​လို​မှ​ဖမ်း​ဆုပ်​လို့​မ​မိ​နိုင်​တော့​ပါ။ သူ​ကြည့်​နေ​တုန်း​မှာ​ပင် လမင်း​ပစ္စည်း​လေး​က တင်းမာ​သ​ထက်​ပိုမို​တင်းမာ​လာ​ဟန်​ရှိ​ပြီး အနည်းငယ်​ထောင်​မတ်​လာ​သည်။ လမင်း​က​ပဲ​တမင်​စိတ်​လှုပ်ရှား​၍ ကြွက်သား​တွေ​မ​ငြိမ်​တာ​လား​တော့ သူမသိပါ။ သူ့​မျက်စိ​ထဲ​မှာ​တော့ လမင်း​ပစ္စည်း​လေး​ဟာ မတ်​လိုက်​ငိုက်​လိုက် ငိုက်​လိုက်​မတ်​လိုက်​ဖြစ်​နေ​သည်။
ထို​စဉ်​မှာ​ပဲ လမင်း​လက်​တစ်ဖက်​က သူ့​လက်ဖျား​တွေ​ကို အသာအယာ​လာ​ဆုပ်​ကိုင်​လိုက်​သည်။ ထို့နောက် လက်​ကို​ခုံ​အောက်​သို့​လျော​ချ​လိုက်​ပြီး သူ့​ပုဆိုး​ပေါ်​ရှိ မာကျော​နေ​သော ပစ္စည်း​ပေါ်​သို့​တင်​ပေးလိုက်​သည်။
သူ့​ဘဝ​မှာ​သူ​တ​ပါး​ရဲ့​ပစ္စည်း​ကို ကိုင်​ဖူး​ချင်း​က ဒါ​ပထမ​ဦး​ဆုံး​ပါ။ မိမိ​ပစ္စည်း​ကို မိမိ​ကိုင်​လျှင်​သိပ်​ပြီး အရသာ​မ​ရှိ သ​လို​ခံစား​ရ​ပေ​မယ့် သူတစ်ပါး​ပစ္စည်း​ကို ကိုင်​မိ​လိုက်​သည့်​အချိန်​မှာ​တော့ ရင်​ထဲ​မှာ ဗုံး​တွေ​ဆယ်​လုံး​လောက် ပေါက်သွား​သ​လို တ​ဒု​န်း​ဒု​န်း တ​ဒိန်းဒိန်း​နဲ့​ထိန်း​လို့​မ​ရအောင် ရင်ခုန်​သံတွေ​ဆူ​ညံ​လို့​သွား​သည်။ သူ​ပတ်ဝန်းကျင်​ကို အကဲခတ်​မိ​လိုက်​တော့ ကျောင်းသား​ကျောင်း​သူ​တွေ​က စာအုပ်​ကို​သာ အာရုံ​စိုက်​ပြီး​ငုံ့​ကြည့်​နေ​ကြ​သည်။ ဆရာ​မက​ရှင်း​ပြ​နေ​သော စာ​များ​ကို​လိုက်​လှန်​မှတ်သား​နေ​ကြ​သည်။ သူ့​နား​ထဲ​မှာ​တော့ ဆရာ​မ​ဘာ​တွေ​ရှင်း​ပြ​နေ​သလဲ​ဆို​တာ ကောင်း​ကောင်း​မ​ကြား​ရ​တော့​ပါ။ သူ့​နားရွက်​တွေ​လဲ နီမြန်း​နေ​လောက်​ပါ​ပြီ။ နားထင်​ကြော​ကြီး​တွေ​တင်း​ကာ သူ့​အသွေးအသား​ရဲ့​တောင်း​တ​မှု​တွေ​က ပြင်းထန်​လာ​ပြီး မိမိ​ကိုယ်​ကို​လွတ်​ထွက်​သွား​တော့​မည့်​အလား စိုး​စဉ်​စိတ်​တို့​က ခြံရံ​လျှ​က်​ရှိ​သည်။
လမင်း​က​အ​ထဲ​က​အတွင်းခံ ခံထား​သော​ကြောင့် လမင်း​ပစ္စည်း​ကို သူကောင်း​ကောင်း​ဆုပ်​ကိုင်​ခွင့်​မ​ရ​ပါ။ အတန်း​ထဲ​မှာ​ယောက်ျား​လေး​တွေ တစ်​ယောက်​ပစ္စည်း​တစ်​ယောက်​ကိုင်​ပြီး ကစား​ကြ​တာ အပြစ်ကြီး​တစ်​ခု မဟုတ်​လောက်​ဘူး​ဟု​လို့​တော့ သူ​ထင်​သည်။ ဒါ​သူ​တို့​တက်​သွေးကြွ​လူ​ငယ်​တွေ​ရဲ့ ရမ္မက်​အပေါ်​ဦး​ညွှတ်​ခြင်း တွေ​ပါ။ လိင်​အပေါ်​ရူး​သွပ်​နေ​သည့် သူတို့လို လူပျိုပေါက်​စ​လေး​တွေ​ဟာ တစ်​ခါ​တစ်​ရံ​မှာ အခုလို မိုက်​ရူး​ရဲ​ဆန်​မိ​ကြ​ပေ​ဦး​မည်​ပေါ့​လေ။ သူ​အတင်း​ရဲ​စွာ​ဖြင့် လမင်း​၏​ပစ္စည်း​ကို မိမိ​ရ​ရ​ဆုပ်​ကိုင်​ကြည့်​ဖို့ ဆုံးဖြတ်​လိုက်​သည်။
ထို့​ကြောင့် လမင်း​ပုဆိုး​စ​တွေ​ကို​အသာ​လက်​ဖြင့်​ဆွဲ​လှန်​လိုက်​သည်။ ခုံ​အောက်​ထဲ​တွင်​ထိုး​ထား​သော သူ့​အပေါ်​ဂျ​က်​ကင်​ကို​ဆွဲထုတ်​လိုက်ကာ လမင်း​၏​ပေါင်​ပေါ်​သို့​အသာ​ဖုံး​လိုက်​သည်။ သူ​တို့​လှုပ်ရှား​မှု​တွေ​က ဖြေ​ညှင်း​စွာ ခရီး​ဆက်​နေ​သ​ဖြင့် မည်​သူ​တစ်​ဦး​တစ်​ယောက်​က​မှ သတိထား​မိ​ပုံ​မ​ပေါ်​ပါ။ သူ​လမင်း​ပုဆိုး​တွေ​ကို လှန်​ပြီး​လက်​ကို​အတွင်း​ပိုင်း​ထဲ​သို့ လျှို​လိုက်​သော​အခါ ချော​မွတ်​နေသာ လမင်း​၏​ပေါင်တံ​ပေါ်​သို့ လက်​ဖြင့်​စမ်း​မိ​သွား​သည်။ လမင်း​ပေါင်​သား​တွေ​က နွေး​နေ​သည်။ သူ​ချော​မွတ်​နေ​သော လမင်း​ပေါင်​သား​တွေ​ကို အသာ​ဖျစ်​ညှစ်​ကြည့်​လိုက်​သည်။ ထို့နောက် ထို​ပေါင်​သား​တွေ​မှာ​တစ်​ဆင့် အထက်သို့ အနည်းငယ်​တက်​လိုက်​သော​အခါ အတွင်းခံ​ဘောင်းဘီ​ထဲ​တွင် မာ​ကြော​တောင့်တင်း​နေ​သော လမင်း​ပစ္စည်း​လေး​ကို ဆုပ်​ကိုင်​မိ​သွား​သည်။ သူ​လက်​ထဲ​တွင် လမင်း​ပစ္စည်း​လေး​မှာ နွေး​နေ​သည်။ ထို​နွေး​နေ​သော လမင်း​ပစ္စည်း​လေး​က သူ့​ကို​ချောက်​နက်​ထဲ​သို့ ကန်​ချ​လိုက်​သ​လို ရင်​ထဲ​လှိုက်​က​နဲ ပင့်​သက်​တစ်​ခု​ဖြစ်​ပေါ်​သွား​အောင် ပြုစား​လိုက်​သည်။
အပြာ​စာအုပ်​ပေါ်​တွင် အာရုံ​စိုက်​နေ​သော​လမင်း​က သူ့​ဖက်​သို့​လှည့်​ကြည့်​လာ​သည်။ လမင်း​မျက်လုံး​တွေ​က ရီ​ဝေ​ဝေ​နိုင်​လွန်း​နေ​သည်။ ခြောက်ကပ်​နေ​သော လမင်း​နှုတ်ခမ်း​သား​တွေ​က​လည်း အနမ်း​တစ်​ခု​ကို​တောင်း​တ နေ​သ​လိုလို……။ သူ့​စိတ်​တွေ ဝ​ရုန်း​သု​န်း​ကား​ဖြစ်လာ​မိ​သည်။ လမင်း​က သူ့​ကို​တစ်​ခု​ခု​ပြော​ချင်​နေ​သည့် အ​ကြည့်​တွေ​ဖြင့်​ကြည့်​သည်။ သူ​လဲ​လမင်း​ကို ထပ်တူ​ထပ်မျှ​ကြည့်​နေ​မိ​သည်။
ပုဆိုး​ကြား​ထဲ​ရှိ လမင်း​ပေါင်​ကြား​မှ​နေ​၍ အတွင်းခံ​ထဲ​သို့ လက်​ကို​နှိုက်​လိုက်​သော​အခါ လမင်း​ပ​စ္စ​ည်​လေး​ကို ကြား​ခံ​နယ်​မ​ရှိ​တော့​ပဲ သူ​ဆုပ်​ကိုင်​မိ​သွား​ပါ​သည်။ လမင်း​အ​ကြည့်​တွေ​ပို​ပြီး စိုစွတ်​လာ​သည်။ လမင်း​မျက်လုံး​တွေ​က စာအုပ်​တွေ​ပေါ်​မှာ​မ​ရှိ​တော့​ပဲ သူ့​ဆီ​သို့​သာ​ရောက်​ရှိ​နေ​သည်။ လမင်း​တစ်​ခု​ခု​ကို​တောင်း ဆို​လျှ​က်​ရှိ​သည်။ သူ​လမင်း​၏​ပစ္စည်း​ကို​အားရ​ပါး​ရး​ကြီး ဆုပ်​ထား​လိုက်​မိ​သည်။ သူ့​လက်​ထဲ​တွင် ငါးခူ​တစ်​ကောင်​ဖမ်းထား​ရသ​လို လမင်း​၏​နွေး​တေး​တေး​ပစ္စည်း​လေး​က အနည်းငယ် တုန်​ရီ​နေ​သည်။ လမင်း​မျက်လုံး​တွေ​က ရီ​ဝေ​ဝေ​နှင့်​ပါ.......
လမင်း​ပစ္စည်း​ထိပ်​ကို သူ​လက်​ညိုး​ဖြင့်​ပွတ်​သပ်​ကြည့်​လိုက်​သော​အခါ လမင်း​၏​မျက်လုံး​တွေ မှေး​က​နဲ​ဖြစ်​သွား သည်​အထိ ထိန်း​ချုပ်​မှု​တွေ လွတ်​ကင်း​သွား​ကြော​င်း​တွေ့​ရသ​ည်။ ကွမ်းသီး​ခေါင်း​က​နေ အရင်း​ထိ​ဆို​လျှင် ငါး​လက်မ​ကျော်​ကျော်​ခန့်​ရှိ​မည်​ဟု ခန့်​မှန်​ရ​သော လမင်း​ပစ္စည်း​က သူ့​ပစ္စည်း​နှင့်​မ​တိမ်း​မ​ယိမ်း​ရှိ​မည်​ဟု​ယူဆ​ရသ​ည်။ တက်​ကြွ​နုပျို သစ်​လွင်​နေ​သည့် သူတို့ရဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်​လူပျို ဘဝ​လေး​တွေ​မှာ ယခု​လို​ထူးခြား​တဲ့ အ​တွေ့​ကြုံ​လေး​တွေ​က ကာရန်​ဆွတ်​ပေး​ခြင်း​ကြောင့် ဘဝ​မှ​မေ့​မ​ရ​နိုင်​တဲ့ အမှတ်တရ​လေး​တွေ ရှိ​လာ​လိမ့်​မည်။
သူ့​ရဲ့​ပယ်​ပယ်​နှယ်​နှယ်​ဆုပ်​နှယ်​ခြင်း​ကို ခံထား​ရ​တဲ့​လမင်း​ဟာ​သိပ်​ပြီး ကြာ​ကြာ​ခံ​နိုင်​တော့​မည့်​ပုံ​မ​ပေါ်​ပါ။ သူ့​စိတ်​ထဲ​မှာ​လဲ သာယာ​သည့်​စိတ်​က တစ်ဝက် လူ​မိ​မှာ​စိုးရိမ်​နေ​သည့် စိတ်​က​တစ်ဝက်​ဖြင့် ရင်ခုန်​လှိုက်​မော မှု​တွေ​ဟာ​သူ့​ကို ယိမ်းယိုင်​နေ​စေ​သည်။
လမင်း​ဆီ​မှ စကား​သံလေး တိုး​ညှင်း​စွာ​ထွက်​ပေါ်လာ​သည်။ သူ​လမင်း​ကို တစ်​ချက်​ကြည့်​လိုက်​သည်။
"ဟာ​မ​ရ​တော့​ဘူး​ဟေ့​ကောင် မ​ဆော့​နဲ့​တော့ မင်း​လက်​တွေ​ပေ​ကုန်​လိမ့်​မယ်"
သူ​ရယ်​ချင်​စိတ်​ကို​မျိုသိပ်​ထား​လိုက်​သည်။ သူ​ထင်​တော့​ထင်​သည် ဒီ​ကောင်​အလွန်​ဆုံး​ခံ​လှ လေး​ငါး​မိ​နစ်​ပေါ့..... သူ့​လက်​တွေ​ကို အသာ​ပြန်​ရုပ်သိမ်း​ထား​လိုက်​သည်။
On 8:46 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies No comments
Endless Love of Lang Mountain (Chinese Gay Movie (Eng-Sub))
On 11:32 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies No comments
On 7:34 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay life 11 comments
တကယ်ဆိုကိုယ်တွေကလည်း ယောကျာ်းတွေပါပဲ။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်လိုပဲ ဖခင်စိတ်လဲရှိတယ်။ ကလေးသူငယ်တွေကိုလဲ ချစ်တတ်တယ်။ လောကကြီးရဲ့ ထုံးတန်းစဉ်လာ အယူဝါဒတွေအားလုံးကိုလဲလက်ခံတယ်။ ခက်နေတာက ကိုယ့်စိတ် အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အရာကို ဘယ်သူမှထိန်းချုပ်လို့မရတာကိုတော့ ၀န်ခံစေချင်တယ်။ လူတိုင်းဟာ သာမာရိုးကျတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ပဲဘ၀ကိုရင်ဆိုင်ချင်တာပေါ့။ ဘယ်သူကမှ ဖြစ်ပါစေတော့ ဖြစ်စေတော့ဆိုပြီး တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်တာမျိုး ရှိပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အရာကို ပြောင်းလဲလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ လူတွေဟာ သဘာဝမကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ အသက်ရှင်ဖို့ အကြောင်းတွေဖန်လာကြတယ်။
အပေါင်းအသင်းတွေကြား အထူးသဖြင့် Straight သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာဆိုရင် ချစ်သူရည်းစားအကြောင်းပြောပြီဆိုရင် ကိုယ်တွေကအလိုလိုနေရင်း အပုန်းထဲကဇာတ်လမ်းတွေကို Straight ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးခပ်တည်တည်နဲ့ ရွှီးရတာများတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော်ကတော့ အပုန်းပါ မိန်းကလေးတွေကို မကြိုက်ပါဘူးဆိုပြီးပြောချလိုက်ရင် မင်းဘ၀ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ စဉ်းစားကြည့်။ ကြက်သီးထဖို့တောင်ကောင်းတယ်။ အသက်ငယ်သေးရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ ဒါပေမယ့် အသက်၂၀ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ လိမ်ရတာ ခက်သွားပြီ။ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်နေပြီမို့ ချစ်သူရည်းစားမထားပါဘူးလို့ပြောရင် ယုံချင်မှယုံကြလိမ့်မယ် အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ့်ကို မူမမှန်တဲ့လူလို့မြင်သွားကြလိမ့်မယ်။
တခါတလေကျတော့လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးမိသားရယ်။ ဘာကြောင့်များ ဒီလိုစိတ်တွေဝင်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။ စဉ်းစားလို့ရှိရင် ဦးနှောက်တွေခြောက်ပြီး ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်။ မျက်စိရှေ့မှာ မြင်နေတွေ့နေရတာတွေကလည်း စိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုမှကိုမရှိတာ။ ဟိုမိုတွေရည်စားဖြစ်ပြီဆိုရင် ဘယ်နေ့ကွဲမလဲဆိုတာကိုပဲ စောင့်နေရသလိုလို။ ချစ်လျှက်နဲ့ကွဲမလား သစ္စာဖောက်လို့ပဲကွဲကြမလား တစ်ခုခုပဲ။
သူများအတွဲတွေမြင်ရင်လဲ စိတ်ထဲမှာ အားကျသလိုလိုတော့ရှိသား။ ကိုယ့်ကောင်မလေးနဲ့ကိုယ် လူရှေ့သူရှေ့မှာ ပေါ်ပေါ်တင်တင်တွဲလို့ရတာပေါ့။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်နေစရာလဲမလိုဘူး လက်တွဲချင်ရင်လဲ ပေါ်တင်တွဲ။ ပြီးရင်မိသားဖသားပီပီတောင်ရမ်းလက်ထပ် ဘ၀တစ်ခုကိုအတူတူရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း သာယာတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးတစ်ကိုတည်ဆောက်.......... အင်း မဖြစ်သေးပါဘူးလေ အဲ့ဒီမိန်းမဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကိုတွေ့လိုက်ရင် ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ကိုမရတာခက်တယ်။ ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်စားမိသလိုမျိုးဖြစ်မှာလဲစိုးတယ်။
ခက်တော့ခက်နေပြီ ဆိုသလိုပေါ့ ဟုတ်ပါတယ် တော်တော်လေးကို ခက်နေတာပါ။ ကိုယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့် အရာတွေထဲမှာ မိဘ၊ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်း၊အပေါင်းအသင်း၊ အဲ့ဒါတွေက အဓိကပဲ။ လိမ်ထားမယ်ဆိုရင်လဲ အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲရမယ်။ ဘယ်လောက်များ လိမ်ထားနိုင်မှာ မိုလို့လဲ။ ကိုယ်ဖက်ကရော ဘယ်လောက်များ ပိပိရိရိဟန်ဆောင်ထားနိုင်မှာလဲ။ တွေးကြည့်ရင် ရင်ဘတ်ကို ခဲဆွဲထားသလိုပဲ လေးလေးပင်ပင်ကြီးပါ။
သူများတွေလို ပွင့်လိုက်ဖို့ကလဲ မ၀င့်​ရဲဘူးလေ။ ကိုယ်တွေက တစ်သက်လုံးက ယောကျာ်းလေးလိုနေလာတာ ယောကျာ်းအချင်းချင်း ကြိုက်တဲ့စိတ်ကလွဲရင် မိန်းမဖြစ်ချင်နေတာလဲမဟုတ်ဆိုတော့ ခက်တော့ခက်သားပေါ့။ ဒီကြားထဲ အရှက်အကြောက်ကလဲ ကြီးသေးတာဆိုတော့ အပုန်းမှန်းလူသိမှာလဲကြောက်။ မိန်းမတွေကို စိတ်ဝင်စားချင်ယောင်ဆောင်ရတာကလဲ အလုပ်တစ်လုပ်။ တခါတလေ မိန်းမတွေကလည်း အပုန်းမှန်းမသိ ဘာမသိနဲ့ လာလာပြီးဇယားတွေကပ်လာရင် ကိုယ်တွေက စိတ်တွေကျဉ်းကြပ်ရတာ အမော။ အဲ့လိုအချိန်တွေဆိုရင် ကျွမ်းတွေချည်း လှိမ့်ထိုးချင်တာအမှန်ပဲ။
ဘယ်တက်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဘ၀ကိုကဒီလိုဖြစ်ဖို့ အကြောင်းကံပါလာနေတာကိုး။ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ဘ၀ကိုပဲ သင့်တင့်လျှော်ကန်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ်တွေလို ဘ၀တူတွေကိုတွေ့ရင် ကိုယ်ချင်းစာမိပေမယ့် တခါတလေကျတော့ သူတို့တွေ ရှုပ်နေတာတွေ ကိုယ့်ကျင့်တရားစောင့်ထိန်းမှု လျော့ပေါ့နေတာတွေကို တွေ့ပြန်ရင်လဲ အမြင်ကတ်မိတာတော့အမှန်ပဲ။ ဂေးဆိုတာ ကောင်းတဲ့သတ္တ၀ါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ အမြဲတွေးမိတယ်။ ဖြစ်ချင်တိုင်းကိုဖြစ်နေကြတာပဲကိုး။ စိတ်ဆင်းရဲတယ်။
ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကိုတိုင်ကဂေးဆိုပေမယ့် ဂေးတွေဆိုရင် နည်းနည်းတော့လန့်တယ်။ တစ်ချို့တွေဆို စနှိုက်ကြော်ရတာနဲ့ ဂျိုးကြော်ရတာနဲ့ ပုလင်းကွဲမှန်းမသိ ဘာမှန်းမသိ ရမ်းသမ်းကြိုက်ရတာနဲ့ ပလင်းကွဲရှတော့မှ အခြောက်မကြီးတွေပါဆိုပြီး သောက်ရှက်တွေခွဲရတာနဲ့ တစ်ချို့တွေကြတော့လဲ ယောကျာ်းမှန်းလူသိအောင် စကားပြောရင် စိတ်ထဲကမပါပဲ တဗျဗျနဲ့ အမြင်တွေကို ကတ်လို့။ တွေ့ဖူးပါသေးတယ် Chatting ထဲမှာဆိုရင် ကျားလိုကတာ ကျားလိုက်တာဆိုတာ ကိုယ်တွေကတောင် အားကိုးချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ အပြင်မှာလဲ သွားတွေ့လိုက်ရော နွဲ့လိုက်တာပက်စက်တယ်။ အံ့ရော....... ။
အမှန်ကနွဲ့ရင်နွဲ့တယ်ပေါ့ လက်ခံပါတယ်။ တစ်ချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူး ဟိန်တွေဟန်တွေနဲ့ ကျားဇာတ်တွေခင်းကြတာလေ။ တကယ်တမ်းကတော့ ပုလင်းကွဲရှဖို့ အကြောင်းတွေဖြစ်လာတာ ဒင်းတို့တွေလေ ဘာပြောကောင်းမလဲ ဟင်းဟင်း........
နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတာက လိင်ရမ္မက်သမားတွေ။ ဘယ်နှယ့် ကိုယ်ကလူတစ်ယောက်ပဲ ဥစ္စာ လူ့သိက္ခာလေးကိုငဲ့ပြီး စိတ်ဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်မယ် ကိုယ့်ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားမယ် မစဉ်းစားဘူး တွေ့တာနဲ့ ဒိတ်မယ် ဟိုတယ်သွားမယ် ဟိုဒင်းဟိုလာလုပ်မယ် လိတ်မယ် ဖွာမယ်ကီးမယ်​ ဂျိမ်းမယ်ဆိုတာတွေချည်းပဲ မယုံမရှိနဲ့ အဲ့ဒါတကယ်နော်.......
အဲ့ဒီလိုတွေပြော​နေတော့ ဒီစာရေးနေတဲ့ကောင် Lovealone မင်းကရော သူတောင်ကောင်းကြီးလားလို့ မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း သူတောင်ကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီး ပျက်စီးလေလွင့်နေတာမျိုးကိုတော့ သိပ်လက်မခံချင်ဘူး။ လူဆိုတာ ဘယ်ဘ၀မှာပဲ ရောက်နေရောက်နေ ကိုယ့်ဘ၀ကို အကောင်းဆုံးပြုပြင်နေထိုင်ရမှာပဲမဟုတ်လား။ ဖြစ်ချင်ဖြစ် လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုရင် အလကားသုံးစားမရတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
ထားပါတော့ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်သတ်သတ်ပါ။ ဂေးတွေမှာလဲ ကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပါ ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်ရင်းနီးတဲ့လူတွေ ကြားထဲမှာ လူကောင်းသူကောင်းတွေရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော အပုန်းဘ၀ဆိုတာကြီးက စိတ်ပျက်စရာကြီးပါ။ Bisexual ဆိုလဲတော်သေးတယ် နှစ်ဖက်ချွန်လို့ရတာပေါ့ အဟေးဟေး။
Endless Love of Lang Mountain (Chinese Gay Movie (...